Ciidamo Boolis Nooc Cusub ah oo lagu arkay Wadooyinka Muqdisho [Ciidamadii Xasilinta oo la bedelayo] – warqaat.com Information About Somali New's Today
HomeWARARKA MAANTACiidamo Boolis Nooc Cusub ah oo lagu arkay Wadooyinka Muqdisho [Ciidamadii Xasilinta oo la bedelayo]
Ciidamo Boolis Nooc Cusub ah oo lagu arkay Wadooyinka Muqdisho [Ciidamadii Xasilinta oo la bedelayo]
Wadooyinka Magaalada Muqdisho ayaa maanta lagu arkay ciidamo nooc cusub oo Boolis ah, kuwaasoo watay gaadiidka dagaalka.
Ciidamadan cusub ayaa ku hubeysan Gaadiid cusub oo ay saaran yihiin Qoryaha Boobayasha culus sida Dhashiikaha, waxayna uga duwan yihiin ciidamadii hore inay yihiin ciidamo qaabeysan oo si qurxoon u lebisan, ayna ka muuqato asluub ciidan.
Wadaddda Maka Almukarama ayaa la dhigay ciidamadan oo ay si weyn u isticmaalaan madaxda dowladda Soomaaliya, waxaana dadweynaha jidkaasi ku socdaalay ay sheegeen in ciidamdan si wanaagsan ula dhaqmeen, kana duwanaayeen ciidamadii hore.
Markii ugu horeysay ayaa la arkay ciidamadan Booliska ah oo ku hubeysan gaadiidka dagalaka ee Cabdi-bileyaasha ah oo aanay hore u adeegsan jirin ciidamada Booliska, waxayna wararka qaar sheegayaan inay ciidamadan lagu bedelay kuwii xasilinta magaalada ee uu soo hindisay taliyihii hore ee NISA C/llaahi Sanbaloolshe.
Madaxweyne Farmaajo iyo Cadaaladda, Qiimeyn
AKHRISO: Qodobadda looga hadlayo shirka Dowladda Federaalka & Maamul Goboleedyada ee Muqdisho
53,103 total views, 990 views today
53,103 total views, 990 views today War ka soo baxay Hay’ada Nabadsugida iyo Sirdoonka Qarank ayaa waxaa lagu sheegay in Ciidamada Amniga ay Gacanta ku dhigeen Maxkaxdii ka dambeeyasay weerarkii dadka badan ku dhinteen ee lagu qaaday […]
53,173 total views, 990 views today
53,173 total views, 990 views today Wasaaradda Arrimaha Dastuurka ee Xukuumadda Federaalka ah ee Soomaaliya ayaa maanta qabatay munaasabad lagu daahfurayay Barnaamijka Carabiyaynta Dastuurka KMG ah oo ay ka soo qeybgaleen Wasiir Ku-Xigeenka Arrimaha Dastuurka iyo Safiirka […]
53,184 total views, 990 views today
53,184 total views, 990 views today Wareegto ka soo baxay Xafiiska Madaxweynaha Dowlad-goboleedka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam(Madoobe) ayaa Maanta oo Khamiis ah waxaa lagu Magacaabay Hanti dhowraha guud ee Jubbaland Wareegtada ayaa waxaa Hanti dhowrahaGuud ee Jubbaland […]
53,206 total views, 991 views today
53,206 total views, 991 views today Kulan socday in ka badan sideed saacadood ayaa waxa uu Turkiga ku dhexmaray Mas’uuliyiin uu horkacayay Wasiirka Gaadiidka iyo Duulista Soomaaliya Maaxamed Cabdullaahi Salaad(Omaar) iyo Mas’uuliyiinta Shirkadda Favori ee Maamusha Garoonka […]
53,244 total views, 991 views today
53,244 total views, 991 views today Taliye ku xigeenka Ciidamada Booliska Dowlad Goboleedka Galmudug Col, Cabdi Jaamac Cabdulle ayaa shaaciyay in kadib baaritaano ay sameeyeen ay heleen halkii laga soo abaabulay weerarkii lagu qaaday Xarun uu Gaalkacyo […]